အမှားခံလို့မရတော့တဲ့ ဘာစီလိုနာအတွက် အေတီကိုက နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုများလား? – MySport Myanmar
အမှားခံလို့မရတော့တဲ့ ဘာစီလိုနာအတွက် အေတီကိုက နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုများလား?
ဆယ်တာဗီဂိုကို အဝေးကွင်းမှာ (၂)ဂိုးစီ သရေကျခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်း ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်းက အသက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်ဖြစ်နေတော့ ဘာစီလိုနာအတွက် နောက်ထပ်ပွဲကျပ်တစ်ပွဲကို ထပ်မံရင်ဆိုင်ရနိုင်ကာ အမှတ်လည်းလျော့ကောင်းလျော့နိုင်ပါတယ်။ ဒီပွဲက လာမယ့်စပိန်လာလီဂါ ပွဲစဉ်(၃၃)ရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်လာနိုင်သလို ဘာစီလိုနာရဲ့ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဦးမလားဆိုတာကိုလည်း အဖြေထုတ်ပေးသွားမယ့် ပွဲစဉ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းက ဒီရာသီမှာ အဝေးကွင်းစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနေသလောက် အိမ်ကွင်းစွမ်းရည်က အရမ်းကောင်းမွန်နေပြီး အိမ်ကွင်း(၁၆)ပွဲ ကစားထားပြီးနောက် ရှံးပွဲလုံးဝမရှိသေးပဲ ရှံးပွဲ(၁)ကြိမ်သာရှိထားကာ (၁၅)ပွဲလုံးကို အနိုင်ရထားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ကွင်းမှာ ရီးရဲလ်တစ်သင်းတည်းကိုပဲ အနိုင်မရထားခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာဟာ အိမ်ကွင်းမှာဆိုရင် ဂိုးသွသ်းအားလည်းကောင်းမွန်လှတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအသင်းအတွင်းမှာတော့ ကစားသမားနဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေကြား မပြေလည်မှုလေးတွေ ရှိနေတာကတော့ အသင်းကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
အသက်လက်တီကိုကတော့ လာလီဂါပြန်လည်စတင်ချိန်မှာ ဘီလ်ဘာအိုကို သရေပဲ ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းပွဲတွေကို တောက်လျှောက်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး(၄)ပွဲမှာ ပေးဂိုးက(၁)ဂိုးပဲ ရှိခဲ့တဲ့အထိ ခံစစ်ကျစ်လစ်လွန်းလှပေမယ့် အဝေးကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းက အားရစရာ အနေအထားမှမရှိပဲ သရေပွဲတွေသာ များပြားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံစံကောင်းမပြနိုင်တဲ့ ဘာစီတိုက်စစ်ကိုတော့ အသက်လက်တီကိုတို့ အကောင်းဆုံးဟန့်တားနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ဘာစီဆီကနေ အမှတ်ခွဲယူနိုင်ရေးကို အဓိကထားလာဖွယ်ရှိပါတယ်။
Photo Credit : America TV
ဒီပွဲမှာ ဘာစီလိုနာက လုံးဝခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဘာစီအတွက် အမှတ်လုံးဝအလျှော့မခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အသက်လက်တီကိုလို အသင်းမျိုးနဲ့ ဆုံနေရတာကလည်း ဘာစီလိုနာအတွက်တော့ အနည်းနဲ့အများ ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ အသက်လက်တီကိုကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် အရမ်းစိတ်ချလို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးတော့ ရမှတ်လုံးဝဆုံးရှံးခံမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း နူးကမ့်ကွင်းအတွင်း တွေ့ဆုံမှုတွေအရ ဘာစီလိုနာက ရလဒ်ပိုင်း အသာရထားခဲ့တာဖြစ်လို့ ဒီပွဲလည်း ဘာစီပဲ ကပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
MySport Myanmar2020-06-30T11:50:13+06:30June 30th, 2020|Football, La Liga|